Phuket Sandbox: Ha nagu dhex darin Thailand inteeda kale
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Phuket Sandbox: Ha nagu dhex darin Thailand inteeda kale
Jebinta Wararka Caalamka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska
KP Ho wuxuu ka hadlayaa Shirka Phuket Sandbox ee lagu qabtay Laguna Phuket
Isagoo ka hadlaya Shirkii Sandbox Phuket Sandbox ee lagu qabtay Laguna Phuket, Guddoomiyaha Fulinta ee Kooxda Banyan Tree Group, KP Ho, wuxuu ugu baaqay kuwa siyaasad -sameeyayaasha ah ee Yurub iyo adduunka in ay taageeraan Phuket oo ah aag “cagaar” oo gooni ah.
Hoggaamiyeyaasha dalxiiska ee Shir -madaxeedka Sanduuqa Phuket Sandbox ayaa ku boorrinaya dowladaha Yurub inay aqoonsadaan maqaamka Phuket inuu yahay meel ammaan ah oo loogu talagalay socdaalayaasha caalamiga ah.
“Liiska Cagaaran” Goobaha Sandbox -ka ayaa ah waxa horseedi doona soo -kabashada dalxiiska adduunka ayuu yiri aasaasaha Kooxda Banyan Tree KP Ho.
Ilaa iyo inta Sandbox-ka si fiican loo abaabulay, maadaama ay ku taal Phuket, waa in laga soocaa dalka intiisa kale.
Iyada oo Bangkok ay la halgameyso tirada sii kordheysa ee cudurrada COVID-19, KP Ho, wuxuu u sheegay ergooyinka Yurub, shirkadaha duulimaadka, saraakiisha sare, iyo hoggaamiyeyaasha ganacsiga, in Phuket Sandbox uu guuleysto, ay lama huraan tahay in Phuket la siiyo “cagaar” xaalad uu ku socdo.
Phuket waxay leedahay awood ay ku hogaamiso dib u soo kabashada dalxiiska adduunka, oo ah taariikhi ah Hindisaha Phuket Sandbox ayaa halbeeg u ah meelaha kale ee la raaco, ayuu yidhi. Laakiin, si ay u guulaystaan, dawladuhu waxay u baahan yihiin inay u aqoonsadaan inay tahay meel ammaan ah, oo meel gaar u ah, halkii ay isku dari lahayd xaaladdeeda safarka iyo inta kale ee Thailand.
Maamulka Dalxiiska ee Thailand Miisaankiisu Waa
Mowqifka KP Ho waxaa taageeray Hay'adda Dalxiiska ee Thailand (TAT) Shirka Phuket Sandbox Summit. Ku -xigeenka Guddoomiyaha Suuqgeynta Caalamiga ah ee Yurub, Afrika, Bariga Dhexe iyo Ameerika, Siripakorn Cheawsamoot, ayaa yiri: “Waxaan isku dayeynaa inaan u soo jeedinno Phuket dowladda UK inay ka mid noqoto liiska cagaaran ee meelaha loo safro, in kasta oo Thailand ay ku jirto liiska amber. Waxaan ku rajo weynahay Phuket Sandbox. Phuket waa badbaado weligeedna cidna u yeeli mayno nabadgelyadeeda. ”
Wuxuu xaqiijiyay inay jiraan ku dhawaad ​​300,000 oo qol oo la ballansaday ilaa hoteellada SHA Plus, iyadoo ku dhawaad ​​13,000 ay yimaadeen iyo 124 duulimaad 28 maalmood kadib, iyadoo kuwo kale oo badan la qorsheeyay. Suuqyada ugu sarreeya waa US, UK, Israel, Germany, France, UAE, iyo Switzerland oo celcelis ahaan joogitaankoodu yahay 11 maalmood.
Iyada oo welwelku ku sii kordhayo dhammaan meelaha safarada muhiimka ah ee Koonfur -bari Aasiya oo la halgamaya tirooyinka caabuqa, qaabka Phuket Sandbox ayaa si dhakhso ah u noqonaya heerka rajada ee warshadaha dalxiiska.